भारतीय निर्वाचनको सन्देश – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
भारतीय निर्वाचनको सन्देश
२०७१ जेष्ठ ११, आईतवार ०४:५३ गते
भारतीय लोकसभाका लागि भएको पछिल्लो निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको शानदार विजय भएको छ भने भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै अधिकांश समय सत्तामा बसेको कांग्रेसको शर्मनाक पराजय भएको छ । चुनावमा भारतीय जनता पार्टीप्रति जुन लहर देखिएको छ, त्यो भाजपाप्रतिभन्दा पनि मोदीप्रतिको जनलहरको आँकलन गरिएको छ । त्यसैले, यतिबेला भारतमा जित भाजपाको भन्दा पनि मोदीको जित हो भन्ने ढंगले विजयोत्सव मनाउने काम भैरहेको छ ।
काश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म सम्पूर्ण भारत मोदीमय भएको त छ नै, विश्वको ध्यानसमेत कुनै न कुनै रुपमा मोदीमाथि केन्द्रित छ । वासिङटनले चुनावी परिणाम घोषणा हुनुअगावै नाम नलिइकन मोदीसँग काम गर्न आतुर रहेको संकेत दिइसकेको छ भने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले पनि मोदी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु त कहिले हो कहिले, मतगणनाका प्रारम्भिक परिणाम आउन लाग्नासाथ मोदीमाथि बधाई बर्साइसकेका छन् । अमेरिका र पाकिस्तानले मात्र होइन, पछिल्लो समय विश्वका धेरै शक्तिशाली मुलुकहरुले मोदीमाथि तँछाडमछाड बधाई बर्साइरहेका छन् ।
भारतीय निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा यो निर्वाचनले केही मननयोग्य सन्देशहरु दिइरहेको छ । पहिलो कुरा त जित मोदीको कि भारतीय जनता पार्टीको भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । अनि, हार सोनिया–राहुलको कि कंग्रेसको ? चुनावका दौरान समाचार माध्यमहरुमा भाजपा र कंग्रेसभन्दा पनि मोदी र राहुल छाए । जयजयकार भाजपाको होइन मोदीको भयो । पराजयको सहानुभूति कंग्रेसभन्दा पनि राहुलमाथि गरियो । चुनावमा नेतृत्वको मह¤वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले कुनै न कुनै रुपमा अरु नेताभन्दा चुनावी कमान्ड गर्ने व्यक्ति चर्चामा रहनु स्वाभाविक हो, तर पार्टीभन्दा पनि बढी चर्चा भने नहुनु पर्ने हो, तर भयो । यो चर्चा व्यक्तिकेन्द्रित भारतीय राजनीतिको प्रतिबिम्ब पनि हो ।
राजनीतिमा न सधैँ हार हुन्छ, न जित । जनता जहिले पनि विकल्पको खोजीमा हुन्छन् । त्यसैले, राजनीतिमा हारजित सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो । तर, पछिल्लो समय निरन्तर १० वर्ष सत्ता सम्हालेको कंग्रेसलाई सत्ताबाहिर पु¥याएर भाजपालाई सत्तामा पु¥याउनु जति स्वाभाविक हो, कंग्रेसलाई एकैपटक त्यति सानो साइजमा सीमित गर्नु त्यत्तिकै अस्वाभाविक पनि हो । सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्न नसक्ने गरी कंगे्रसलाई पाखा लगाउँदा भोलि मोदीको सत्ता निरंकुश हुँदा कसले खबरदारी गर्ने ? इतिहासको कुनै कालखण्डमा ४०० भन्दाबढी सिट जितेको कंग्रेसले ४३ सिटमा खुम्चिएर बस्नुपर्ने स्थिति आउनु भनेको त्यो कंग्रेसको लागि मात्र होइन, भारतीय लोकतन्त्रकै लागि पनि सुखद स्थिति होइन । किनकि, लोकतन्त्रमा जहिले पनि प्रतिपक्ष कमजोर होइन, सशक्त चाहिन्छ । जब कि, कंग्रेसले ५४३ सिट भएको लोकसभामा जम्मा ४३ सिट मात्र हात पारेको छ । सम्पूर्ण सिटको १० प्रतिशतभन्दा कम सिट जित्ने दलले अब लोकसभामा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ला ?
राजनीतिक दलहरुका लागि चुनावपश्चात्को परिणाम जे होला, तर चुनावअघि नै हार स्वीकार गर्नु भनेको कुनै पनि राजनीतिक दललाई सुहाउने कुरा होइन । भोट मोदीसँग पनि थिएन, राहुलसँग पनि थिएन । उनीहरुसँग थियो त मात्र आफ्नो एक÷एक भोट थियो । मोदी र राहुल दुवैले बाँकी सबै भोट जनतालाई फकाएर आफ्नो पोल्टामा पार्नुपथ्र्यो । त्यो भोट आफ्नो पक्षमा पार्न दल, दलको नेतृत्व र उम्मेदवारलाई आत्मबल चाहिन्थ्यो । तर, यस पटकको निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व नै भाजपाले उत्साहपूर्वक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा नरेन्द्र मोदीलाई अगाडि सा¥यो भने कंग्रेसले चुनावी कमान्ड राहुल गान्धीले सम्हाल्ने भने पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा राहुललाई अगाडि सार्न सकेन । कंग्रेसको यो लाचारीपनले जनताबीच कंग्रेसले चुनावअगाडि नै एक प्रकारले हार स्वीकार गरिसकेको सन्देश गैसकेको थियो । त्यसैले त मत परिणाम त परै जाओस्, मतदान हुनुभन्दा धेरै दिन पहिलेदेखि नै मोदी भारतको नयाँ प्रधानमन्त्री हुने अड्कलबाजी आइसकेको थियो । मोदी एक प्रकारले चुनावअगाडि नै प्रधानमन्त्री भैसकेका थिए भने राहुलले हार स्वीकार गरिसकेका थिए । चुनावी परिणामले त राहुलको चुनावपूर्वको हार स्वीकारोक्ति र मोदीको चुनावअगाडि नै भैसकेको प्रधानमन्त्री पदलाई वैधानिकता मात्र दिएको थियो ।
अहिले भारत मोदीमय भएको छ । कुनै समय दिल्लीमा अप्रत्याशित रुपमा उदाएका अरविन्द केजरीवालले पनि दिल्लीलाई मात्र नभएर सिङ्गो भारतलाई केजरीवालमय बनाएका थिए । तर, तिनै केजरीवाल अहिलेको लोकसभा निर्वाचनमा कता हराए कता ! सम्भवतः ४९ दिने सत्ताबाट पलायन नै उनको यो हविगतको कारण बन्यो । राजनीति अरुलाई फोहोर गाली गरेर आफूलाई सफा देखाउने विषय होइन, बरू फोहोर पोखरीमा हाम फालेर पोखरीलाई सफा पार्ने काम हो । दिल्लीका मुख्यमन्त्री भएर केजरीवाल फोहोर पोखरीमा हाम त फाले, तर फोहोर पोखरी सफा नगरी ४९ दिनमै नाक थुनेर भागे । त्यसैले त, दिल्ली विधानसभामा दोस्रो स्थान हासिल गरेको उनको आमआदमी पार्टीले लोकसभाको निर्वाचनमा ४ सिटमा चित्त बुझाउनुप¥यो ।
भारतीय राजनीतिमा परिवारवादको धेरै लामो श्रृङ्खला छ । भारत स्वतन्त्र भएयता कंग्रेसमा गान्धी–नेहरू परिवारको निर्णायक भूमिका मात्र होइन, नेतृत्व सधैँ उनीहरुका हातमा रह्यो । बाहिर देखिनेमा यदाकदा कंग्रेसबाट कुनै नेता प्रधानमन्त्री भए तापनि त्यसको मुख्य साँचो गान्धी परिवारमै रह्यो । भद्र मानिएका पछिल्ला प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको आलोचना हुन्थ्यो भने सबैभन्दा बढी आलोचना उनी सोनियाबाट परिचालित छन् भन्ने कुरामा हुन्थ्यो । वास्तविक प्रधानमन्त्री सोनिया हुन् र मनमोहन सिंह त मोहरा मात्र हुन् भन्ने कटु आलोचना विपक्षीहरुले सिंहमाथि गर्ने गर्थे ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतमा नेहरूले १४ वर्ष एकछत्र शासन गरे । नेहरूबाट इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी हुँदै अहिले चौँथो पुस्ताका राहुल गान्धीसम्म आउँदा पनि अझै कंग्रेसमा परिवारवादलाई स्थापित गर्ने प्रयास भैरहेको छ । इतिहासका धेरै कालखण्डमा परिवारवादलाई पटकपटक अनुमोदन गरेका भारतीय जनताले यसपटक भने परिवारवादलाई रूचाएनन् । योग्यता भनेको इतिहासको विरासत होइन, बरू वर्तमानलाई मूल्यांकन गरेर भविष्यको लक्ष्य तय गर्न सक्नुचाहिँ योग्यता हो भन्ने पाठ भारतीय पछिल्लो निर्वाचनले दिएको अर्को सन्देश हो ।
भाजपामा अहिले पनि लालकृष्ण अडवानीदेखि राजनाथ सिंहसम्मका एक से एक नेता छन् । उनीहरु मोदीभन्दा वरिष्ठ मात्र होइनन्, मोदीका राजनीतिक गुरू पनि हुन् । यस्ता वरिष्ठलाई पछि पार्दै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका मोदीले चुनावी लहर पनि त्यसरी ल्याए कि मानौँ कि उनी भारतका लागि विधाता बन्नेवाला छन् । लालकृष्ण अडवानीहरु मोदीका अगाडि फिक्का देखिएका छन् । वाकपटुता मात्र नभएर विकासका नयाँनयाँ मोडेल ल्याउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने क्षमताका कारण पनि मोदी भारतीय जनताका आशका केन्द्र बनेका हुन् ।
चुनावमा जनताले कुनै व्यक्तिलाई पनि हराउँदैनन् र कुनै व्यक्तिलाई पनि जिताउँदैनन्, बरू कुनै व्यक्तिका नीति, नेतृत्व र योगदानलाई जिताउँछन् । कसैले नीति, नेतृत्वको माध्यमबाट योगदान गरिसकेको रहेनछ भने आफूले छानेको उम्मेदवारले भविष्यमा आफ्नो आशाअनुरुप काम गर्ला भन्ने अपेक्षामा चुनाव जिताउँछन् । भारतीय निर्वाचनमा पनि भाजपा वा मोदीलाई जिताएको भन्दा पनि उनले गुजरातको मुख्यमन्त्री भएपश्चात् गुजरातमा गरेको परिवर्तन देखेर जिताएका हुन् । जसरी उनले छोटो समयमा गुजरातको अकल्पनीय परिवर्तन गरे, भोलि सिंगो भारतलाई त्यही परिवर्तन देलान् भन्ने आशलाई जिताएका हुन् । जनताको सरोकार मोदीको काम हो, मोदी होइनन् । मोदी त निमित्त मात्र हुन् । चुनाव मोदीले जितेको होइन, उनीप्रतिको आशाले जितेको हो । त्यो आशालाई मोदीले विश्वासमा परिणत गर्छन् कि निराशामा बदलेर स्वयम् केजरीवाल बन्छन्, त्यो भने हेर्न केही वर्ष पर्खनु पर्ने छ ।
जीवनमा खुसीको महत्त्व के छ !
मिस धादिङको नाममा ठगी गर्ने दुई पक्राउ
धादिङ । मिस धादिङको नाममा ठगी गरेको आरोपमा धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका वडा नं ७ खानीखोलाबाट दुई जना पक्राउ परेका छन्...